निसान जूक: आफूलाई लागि प्राविधिक विनिर्देशों बोल्न!
2010 मोटर वाहन समूह "निसान" को लागि एउटा कोसेढुङ्गो थियो। यो समयमा, संयंत्र एक कम्प्याक्ट क्रसओभर "निसान बिटल", एक चिरपरिचित आफ्नो पैतृक जापान, तर पनि टाढा यसको सीमाना बाहिर मात्र होइन भेद सक्दैन जो बीच नयाँ उत्पादन, धेरै विकास भएको थियो। हामी कुरा यस लेखमा, यो एसयूवी केही सुविधाहरू धन्यवाद एक bestseller भएको छ।
निसान जूक: तस्बिर र बाह्य उपस्थिति को एक सिंहावलोकन
एकै समयमा नयाँ वस्तुहरूको डिजाइनमा धेरै कार को सुविधाहरू बुझ्न: केवल एक महत्त्वपूर्ण विवरण दर्शाउन चाहन्छु। यस मामला मा, "निसान" को उपस्थिति एकदम आकर्षक र आधुनिक छ: शरीर को हरेक सेन्टिमिटरले जो कुनै पनि चिनियाँ कार जस्तो छैन - यो एक युरोपेली ब्रान्ड प्रतिलिपि छ। एक आधुनिक नयाँ उत्पादन कटा शरीर आकार दिन्छ। सजिलै यो गोलाकार पाङ्ग्रा arches र शीर्ष मा आफ्नो तेज किनारा, यो एक खेल कूप को शैली बनेको एक छत क्रसओभर, छ। यो शरीर आकार निसान जूक aerodynamic विनिर्देशों देखि सुधार भएको छ। विकासकर्ता पनि यसको विकेन्द्रहरु द्वारा विशेषता छ जो अगाडि को प्रकाशिकी र फिर्ता, को बारे मा भूल छैन। शायद कुनै ", भोल्भो C30," स्वीडिश समाचार संग समानता नोटिस गर्नेछन् र कसैले "बग" मा प्रकाश पूर्ण अद्वितीय छ भनेर भन्न हुनेछ। यो वास्तविकता गर्न पत्राचार वा छैन, दुरुस्त जवाफ फेला परेन, तर कुनै पनि मामला मा नयाँ जापानी कार को डिजाइन indifferent जो कोहीले छोड्न छैन।
यो नयाँ क्रसओभर मा सैलून राम्रो तरिकाले गरिएका कि टिप्पण लायक छ। तपाईं देख्नु पर्छ पहिलो कुरा उत्कृष्ट Ergonomics र सबै भित्री विवरण को विचारशील व्यवस्था छ। भित्री डिजाइन बरु एक ह्वेल गरेको पुच्छर को रूप मा असामान्य परिष्करण सम्मिलित गर्नुहोस्, र केन्द्र कन्सोल सबै शैली मोटरसाइकल ग्याँस ट्यांक छ। सामाग्री गुणस्तर, सधैं रूपमा, उचाई मा: मोडेल "बिटल" को ड्यास को सामने मा एक ठोस कोटिंग कुनै न कुनै प्लास्टिक छ।
निसान जूक: प्राविधिक विनिर्देशों
प्रौद्योगिकी विशेषताहरु - त्यसैले सर्वेक्षण को अर्को भाग मा लागौं। नयाँ युरोप लागि "निसान बिटल" दुई पेट्रोल र एक डिजेल संस्करणमा गरिनेछ। रूसी बजार मा नयाँ उत्पादन संग मात्र दुई इंजेक्टर विकल्पहरू आपूर्ति गरिनेछ। तर यो एकदम रूस देखि आफ्नो ग्राहकहरु खुसी पार्न जापानी चासो पर्याप्त छ। त्यसैले पनि निसान जूक लागि इन्जिन को समीक्षा गर्न उत्प्रेरित गरौं। - 110 अश्वशक्ति, काम मात्रा - 1.6 लिटर शक्ति: पहिलो एकाइ को प्राविधिक विशेषताहरु निम्न संकेतक छ। दोस्रो पेट्रोल इन्जिन नै काम मात्रा मा पहिले नै 190 अश्वशक्ति मा एक शक्ति छ। एक छ-गति "संयन्त्र" वा: खरीदार दुई प्रसारण को एक चयन गर्न मौका छ stepless variator प्रकार Xtronic।
निसान जूक: मूल्य
2013 मा नयाँ "निसान बिटल 'लामबद्ध को प्रारम्भिक आधार XE मा लागत 690 हजार rubles को एक चिन्ह सुरु हुनेछ। यस मामला मा, खरीदार एक 1.6-लीटर 110-अश्वशक्ति पेट्रोल इन्जिन र6गति संग एक क्रसओभर प्राप्त हुनेछ मार्गदर्शन प्रसारण। ठीक छ, "शीर्ष अन्त" उपकरण 194 000 rubles मा जापानी एसयूवी को एक प्रेमी खर्च हुनेछ।
यो संकुचित ध्यान लायक छ को निसान एसयूवी को जूक, जो को प्राविधिक विशेषताहरु आफु को लागि कुरा!
"सूत्र-1": को मोनाको ग्रान्ड प्रिक्स
जब शोरूम मा एक लाभ संग एक कार खरीद लागि के हेर्न?
2011 देखि संचालन र मर्मतका टोयोटा को केमरी लागि निर्देशन
आलु बिना सलाद: राम्रो विचार
वजन लागि औषधि "Bilayt": डाक्टर को समीक्षा
मेष र लिब्रा महिलाहरु को संगतता - के विवाह संघ सफल छ?
बच्चाहरु Zhirinovskogo Vladimira Volfovicha। व्यक्तिगत जीवन र परिवार
मानिसहरू मा Trichomonas: लक्षण र उपचार तरिका
कोरियोग्राफर लियोनिद Lavrovsky: जीवनी, फोटो
कुकुर के खान छैन,?
अन्डा संग पोलेको टमाटर: व्यञ्जनहरु